ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्दै नायिका सोनाक्षी ! – ईमेची डटकम
पूर्वको सर्वाधिक लोकप्रिय अनलाइन
ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्दै नायिका सोनाक्षी !
Posted byइमेची संवाददाता September 20, 2019 September 20, 2019 Leaveacomment on ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्दै नायिका सोनाक्षी !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षीले आफू अभिनेता ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्न चाह रहेको बताएकी छन् । लाइफ स्टाइल म्यागजिनलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा उनले आफू विवाहका लागि ऋतिकसँग राजी भएको बताएकी हुन् । ‘कुन पुरुष सबैभन्दा ठीक हुन सक्छ, जोसँग सोनाक्षी विवाह गर्न चाहन्छिन् ?’ भन्ने म्याग्जिनको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘ ‘म यस्तो पुरुषलाई अपनाएर जीवनसाथी बनाउन चाहन्छु जसले मलाई खास महत्व दिन्छ र कहिल्यै झुटो बोल्दैन ।’
त्यसपछि फिल्म क्षेत्रकै मान्छे विवाहका लागि रोज्दा कसलाई रोज्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ऋतिकको नाम लिएकी हुन् । उनले आफूले कुनै गलत नियतले विवाह नगर्ने पनि स्पष्ट पारेकी छन् ।पछिल्लो समय बलिउडमा अभिनेत्रीहरुको विवाहले चर्चा पाउन थालेको छ । सोनम कपुरले बिहे गरिसकेकी छन् भने प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोण पनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छन् ।
सोनाक्षी सिन्हा से’क्सबारे किन कुरा गर्न चाहन्छिन् ?
दबंग फिल्मबाट बलिउडमा कदम राख्ने सोनाक्षी सिन्हा पहिलो पटक से’क्स कमेडी फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ मा देखिनेछिन् ।
धेरैजसो पारिवारिक फिल्ममा देखिने सोनाक्षी यस्ता विषयमा आधारित फिल्मबाट बच्ने गर्थिन् ।
खानदानी शफाखाना फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा बेबी बेदीको भूमिका निभाइरहेकी छिन् जसले पैतृक सम्पत्तिको रुपमा मामाको विशेष ‘शफाखाना’ चलाउने जिम्मेवारी पाउँछिन् ।
उक्त ‘शफाखाना’ मा मानिसहरु यौडनसम्बन्धि समस्याको उपचार गर्न आउँछन् ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा सोनाक्षीले भनिन्, ‘म सोच्थेँ कि सेडक्सजस्तो विषय छ भने म के गर्ने होला ? म सोनाक्षी सिन्हा पारिवारिक फिल्म मात्र खेल्छु । मेरो आमा–बुवाले के भन्नुहोला ? जब मैले फिल्मको स्क्रिप्ट पढेँ तब मलाई यो फिल्ममा अभिनय गर्न भित्रदेखि नै रुची जाग्यो । यो एउटा यस्तो फिल्म हो जसले आजको समय बताउँछ ।’
सोनाक्षी मान्छिन् कि भारतमा आज पनि यौडनसम्बन्धि कुरा गर्न कठिन छ । यसबारे मानिसहरु कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् जबकी कुरा गर्दा नराम्रो सोच्नु हुँदैन ।
‘जब रुघा–खोकी, ज्वारोका लागि तपाईं डाक्टरकोमा जानुहुन्छ भने यौडन सम्बन्धि रोगबारे किन कुरा गर्नु हुँदैन ? यो जागरुकता ल्याउन आवश्यक छ ।’
पारिवारिक फिल्म हो ‘खानदानी शफाखाना ?’
सोनाक्षी सिन्हा मान्छिन् कि जागरुकता ल्याउनका लागि यो विषयलाई विद्यालयको पठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
उनी भन्छिन्, ‘यदि बच्चाहरुलाई यसबारे जानकारी दिइएन भने उनीहरुले गलत माध्यमबाट यसबारे थाहा पाउन खोज्छन् । बच्चासँग यो विषयमा कुरा गर्न आमा–बुवा अप्ठेरो मान्छन् । अब बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि यो लज्जाको विषय होइन । ’
कहिले पनि से’क्सबारे आमा–बुवासँग कुरा नगरेको व्यक्तिमा आफू पनि पर्ने सोनाक्षीले बताइन् । स्कूल र कलेजका दिनमा साथीहरुमार्फत् यसबारे जानकारी पाएको बताइन् ।
के यो फिल्म परिवारसँग बसेर हेर्न सकिन्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो फिल्म पारिवारिक हो जसलाई बच्चा–वृद्ध सबैसँग बसेर हेर्न सकिन्छ ।’
उनी फिल्मकी निर्देशक शिल्पी दासगुप्तालाई श्रेय दिँदै भन्छिन्, ‘एक महिला निर्देशक भएको नाताले उनले गडम्भीर तरिकाले यो विषयलाई सम्हालेकी छिन् जो एक पुरुष निर्देशकले गर्न सक्दैनथे ।’
Posted byइमेची संवाददाता September 20, 2019 September 20, 2019 Posted inमनोरञ्जन
दशैको मुखैमा खाना पकाउने ग्यासको मुल्य घट्यो अब गृहणीलाई राहत
९ घटनाः बलिउड सुपरस्टारले सताएपछि छिमेकीले पुलिस बोलाए